IAlmendron Cottage-NguSir Vivian Richards Stadium
Ifakwe kwindawo enedolophu yaseAntigua naseBarbuda. Indlu epholileyo / epholileyo enesitayile esilula esamkelwa nguye nabani na ondwendwela isiqithi. Kufuphi nevenkile ethengisa ukutya kunye nokuhamba imizuzu emi-5 ukusuka kwibala leqakamba elikhulu e-Antigua nazo zonke izinto eziyimfuneko ezifunekayo ukuze uhlale kamnandi. Kukho i-Fiber optic Internet ebonelelweyo engafane ibonwe kwisiqithi sonke ikunika uqhagamshelo olukhawulezayo lwe-intanethi. Inkonzo yethu ibonelela ngendlu ecocwe ngokucokisekileyo kuyo yonke indwendwe.
Indawo ebalaseleyo yeqela okanye usapho oluchitha iholide yabo kwisiqithi esihle saseAntigua. Indlwana evuthelwe umoya ngokupheleleyo, ibekwe kwindawo enesango, enembono entle yeBala Lemidlalo ukusuka kwibalcony. I-TV yomlilo eyi-43" idityaniswe nenkqubo yesandi efikeleleka nge-blue tooth (enokuqhagamshelwa kwi-TV).
Olu luluntu olunesango phakathi komgama wokuhamba weSir Vivian Richards Stadium kunye nemizuzu emi-5 yokuqhuba usuka kwivenkile enkulu. Indawo yokubhaka inesonka esimnandi esitsha yonke imihla kwaye yimizuzu emi-4 kuphela ukuqhuba.
Sifumaneka ngokulula kuyo nayiphi na imibuzo yeendwendwe kunye neenkxalabo.